The 11 PlayStation lalao anao tanteraka tsy afaka malahelo ao amin'ny taona ho avy - News Fitsipika
The 11 PlayStation lalao anao tanteraka tsy afaka malahelo ao amin'ny taona ho avy
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “The 11 PlayStation lalao anao tanteraka tsy afaka malahelo ao amin'ny taona ho avy” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com tamin'ny Talata 16 Jona 2015 12.00 UTC
Sony nampiseho eny lehibe fanangonana ny lalao vaovao, Nanome tsipiriany vaovao amin'ny zavatra manokana sasany lalao lehibe, dia nanambara fa ny Tetikasa Morpheus virtoaly zava-misy ho misy headset taona manaraka.
Ankoatra ny Final Fantasy VII remake, ary Shenmue III Kickstarter fanentanana, eto dia ny 12 ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny PlayStation Sony lineup ho an'ny taona manaraka.
Sony ny Tetikasa Morpheus VR headset dia ho hita ao amin'ny tapany voalohany amin'ny taona manaraka. Sary: Jae C. Hong / AP
Sony nanambara vitsivitsy potika kely ny zava-misy momba ny virtoaly headset sy Oculus tetikasa Morpheus mpifaninana amin'ny F3. Izany dia ho hita ao amin'ny tapany voalohany amin'ny taona manaraka, niaritra "-jato dolara maro", ary hanana manodidina 30 lalao, miainga amin'ny piozila sy ny fialam-boly lalao amin'ny voalohany singiolary multi-mpilalao shooter avy guerilla Studios.
Farany Guardian amin'ny farany ho hita ny hilalao amin'ny herintaona taorian'ny mihoatra ny dimy taona ny fiandrasana.
Sony indray-dia nanambara ny farany Guardian, tena mialoha ny lalao fahatelo avy amin'ny mpamorona ny lalao ico nankafizin'ny olona traikefa nahafinaritra sy aloky ny Colossus, izay mametraka anao amin'ny fanaraha-maso ny tanora zazalahy trandrahana ny rava noho ny fanampian'ny goavana vorona / alika zavatra.
Dimy taona lasa izay Sony misarom-boaly ny lalao tao F3 ny PS3, ankehitriny ny orinasa dia nampanantena izany amin'ny farany ho hita hilalao ao amin'ny PS4 amin'ny herintaona.
Talen'ny ny andian-dahatsoratra, Fumito Ueda, dia mbola doha ny lalao na dia tsy miasa intsony ny Sony.
Tsy misy olona ny Sky
Ny procedurally Niteraka toerana fitrandrahana lalao Mampanantena tontolo tsy misy farany ny mandiso eo, hahita fiainam-baovao sy ny mitsoka ny zavatra. Sary: Tsy misy olona ny Sky
Epic toerana fitrandrahana lalao tsy misy olona ny Sky avy Britanika developer Hello Games naseho eny, anisan'izany ny ady, ny sasany famantarana ny vahiny sy ny tsara karazana kely ny handringana ny tontolo iainana - ny zava-drehetra ianao te Te avy amin'ny Star-Trek toy ny traikefa mba sahy mandeha izay tsy efa eo anatrehan'i.
Ny tena fivarotana teboka ny lalao dia ny Naripaka daholo ny sarangan'olona ambaratonga: tsy misy farany procedurally niteraka kintana rafitra Miandry mpilalao mba mandiso eo, ary manomboka trandrahana, rehetra namorona iray 10-SAMPA indie developer mipetraka any Guildford.
Mampaninona hahazo alalan'ny milina azo baikoina dinosaurs in Horizon Zero Dawn.
Tezitra 4 Tsy ny lahatsoratra-Tranga ihany no izao tontolo izao miandry PS4 Gamers. Ny Zavatra tsy roleplaying lalao avy Killzone developer Guerrilla Games, Horizon: Zero Dawn manolotra tontolo vaovao maniry avy ny rava ela milina iray izay mipetraka eo amin'ny tampon'ny ny sakafo rojo. Ny lalao dia manasongadina ny vehivavy mpandray anjara fototra, an-trano-nanao fitaovam-piadiana sy ny fihazana ny goavana dinosaurs alalan'ny milina azo baikoina, Noho avy ny taona manaraka.
tsy fantatra 4: A Mpangalatra Ny Farany
Nathan Drake ny heverina ho traikefa nahafinaritra farany. Sary: Sony
Sony ny tena mialoha traikefa nahafinaritra lalao andian-dahatsoratra dia hanana ny fahefatra, ary lazaina fa ankalamanjana farany amin'ity taona ity. tsy fantatra 4: Mpangalatra ny farany no sakafo mpankafy bebe kokoa ny toy izany koa brawling, ny fitifirana, rehefa niakatra sy ny fifaninanana tanàna amin'ny alalan'ny arabe. Indiana Jones misy anarana hafa.
Ny lalao farany amin'ny Little Big Planet-mpamorona iray hafa ny Molekiolan'ny Media lehibe manaova-ny-ny lalao. Tamin'ity indray mitoraka ity fa tsy momba ny tontolo lamba kely kokoa mikasika ny famoronana zavatra tao amin'ny nofy-toy izao tontolo izao.
Pretty be na inona na inona azo noforonina ao anatin'ny ny lalao tontolo iainana ao anatin'izany ny zavakanto, lalao, filma sy ny mozika, toa.
Zavatra mahazo hafahafa tao anaty ala. Sary: Firewatch
Ve ianao toy ny filasiana? Ny tantara hafahafa tsipika? Ary ny Firewatch Campo Santo mety ho ho anao. Ianao milalao ny olona izay maka ny asa ho toy ny ala manendry mpitily taorian 'ny fiainany manokana no Rava, ny hany fifandraisana vehivavy mpiara-miasa ny onjam-peo, rehefa manomboka zavatra hafahafa mitranga any an-tany efitra.
Destiny: ny Nalaina Mpanjaka
More tantara, kokoa ny fitokonana sy ny PlayStation vitsivitsy exclusives ao amin'ny manaraka Destiny fanitarana.
Toy ny lalao tany am-boalohany, ny vaovao noho Destiny fanitarana tamin'ny Septambra, dia manan-teny kely manokana tamin'i Sony ny Nampahery. PS3 sy PS4 Gamers hahazo hilalao fanampiny fitokonana antsoina hoe ny Echo efi-trano miady Rafeso, ny sasany fiadiana manokana sy ny vahiny vaovao Scout basy amin'ny sniper-toy ny sehatra antsoina hoe Jade Rabbit.
More Call ny Duty, tamin'ity indray mitoraka ity miaraka amin'ny beta manokana amin'ny Sony ny hampionona. Sary: Christian Petersen / Getty Images
Activision ny juggernaut ny voalohany singiolary shooter, Antso hanoa adidy Black Ops III, Hahita sarintany vaovao manokana ny PlayStation 4, raha ny aterineto beta fizahan-toetra ny lalao ihany koa ho voafetra ho Sony ny hampionona.
Ny tontolo vaovao miandry ny famonoana. Sary: Michael Nelson / EPA
Ny sola-doha mpamono Agent 47 dia miverina indray, ary toy ny Black Ops III, ny farany dia hihazakazaka Hitman beta alalan'ny fitsapana ny lalao ihany ny PS4 mialoha ny fandefasana. Expect more violence and revenge.
Vaovao niavaka amin'ny tsy fanafody fitsaboana F ...
Solar Fiaramanidina Hanova AN'HABAKABAKA
20193	0 Article, Call of duty, Kolontsaina, E3, E3 2015, Games, News, PlayStation, Playstation 4, Samuel Gibbs, Sony, Teknolojia, Virtual zava-misy, Virtual worlds
← Dokotera mampanantena loha voalohany taova manao dity ho US dokotera I ny Nokia 3210 ny lehibe indrindra telefaonina fotoana rehetra? →